ixhasa ukwazisa a project kwi-Swedish Institute kuba i-baltic kolwandle kummandla - Ividiyo incoko ye-Italy
I-Swedish Institute imisebenzi ukomeleza isiswedish ubudlelwane phakathi nokuphuhlisa intsebenziswano kunye amazwe ebekwe jikelele i-baltic yolwandle kwaye wethu neighborhoodUkuba umela a isiswedish umbutho, ungenza isicelo isiswedish Institute ukunceda isiswedish Institute umsebenzi kunye organizations kwi-i-baltic States ulwandle, Irussia Empuma lwahlulelwano amazwe. I-Swedish projekthi umsebenzi ukuba Institute ixhasa ukwimo initiating i-uncedo projekthi kufuneka ube cima ifowuni ukuba esinye okanye nangaphezulu imingeni kuchazwe kwi-EU isicwangciso-Buchule ye-i-baltic kolwandle kummandla.
Le projekthi kunye nokuthabatha inxaxheba i-EU Empuma lwahlulelwano amazwe kanjalo kulo mba.
I-amaphulo kufuneka kanjalo babe negalelo nokudala iimeko kuba elide kwaye oluzinzileyo ubudlelwane phakathi kwi-i-baltic kolwandle kummandla. Ngodisemba kwaye januwari, i-Swedish Institute uza ukulungiselela iisemina kuba ufuna ukuba uceba ukwenza isicelo projekthi inkxaso-mali kwi-sikhokelo somgaqo-i-baltic ingingqi projekthi proposal Ukhuphiswano. Kwindawo yokusebenzela ngu-focused kwi Nani njengoko engundoqo isiswedish actor umgqatswa kwaye ezijolise njani uyakwazi kubonisa ukuba loluphi utshintsho kwaye okwenzeke ufuna sibe kunye projekthi, apho okkt kufuneka ibandakanywe lwahlulelwano njani le projekthi unako omeleze imisebenzi Yakho yesiqhelo. Ngamanye amazwi, sisebenzisa uthetha malunga nokunika iinkonzo ezifunekayo izixhobo ukuba ziqulunqe elungileyo kunikela. Lokuqala kwindawo yokusebenzela iza kubanjwa kweyomnga kulo Tumba, Sweden. Tumba, Sweden: bhalisa apha ukuba bathathe inxaxheba kwindawo yokusebenzela kweyomnga kulo Tumba (yokugqibela disemba). Umeå, Sweden: Bhalisa apha kuba umeå disemba indawo yokusebenzela (yokugqibela disemba). Emva kokuba ufake isicelo sakho, uza kufumana i-imeyili apha kunye yakho yobhaliso inani. Ukuba kufuneka uqhagamshelane nathi, nceda unike eli nani.
Видеочат-Кызлар Белән унсигез Ел Видео Чат Өчен Кредитлар
Dating for budlelwane ividiyo incoko roulette ubhaliso eyona incoko roulette Dating kuba ngabantu abadala ngaphandle ubhaliso kuba free esisicwangciso-mibuzo roulette ubhaliso girls omdala Dating ividiyo dating incoko ividiyo incoko roulette ngaphandle ubhaliso ads yabasetyhini wanting ukuya kuhlangana nawe ividiyo Dating nge-girls-intanethi free